वीरगन्ज महानगरपालिका मेयरमा कुन दलबाट को उम्मेदवार ? दुई मेडिकल ‘माफिया’ मैदानमा - Medianp
वीरगन्ज महानगरपालिका मेयरमा कुन दलबाट को उम्मेदवार ? दुई मेडिकल ‘माफिया’ मैदानमा
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १९, २०७४१२:३५0
काठमाडौं, १९ साउन । प्रदेश नम्बर २ को एक मात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिका आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख दलहरू गृहकार्यमा लागेका छन् । आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लाका एक सय २७ स्थानीय तहमध्ये वीरगन्जमा सबैको चासो देखिएको छ ।
वीरगन्ज महानगरमा नेपाली कांग्रेसले अजय द्विवेदीलाई मेयरका रूपमा अघि सारेको छ । कांग्रेसबाट सांसद र पर्सा सभापतिसमेत भइसकेका द्विवेदी वीरगन्जका लोकप्रिय युवा नेता हुन् । उनलाई कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार चयन गरेको हो ।
एमालेले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्धक बसरुदीन अन्सारीलाई अघि सारेको छ । बुधबार वीरगन्जमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय एमाले भेलाले प्रमुखमा अन्सारी र उपप्रमुखमा सोफिया आचार्यलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । भेलामा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल सहभागी थिए ।
गत संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बनेका बसरुद्धिन मेयर पाउने आशमै गत जेठमा एमाले प्रवेश गरेका हुन् । उनी एमाले पार्टीमा प्रवेश गर्नुअघिदेखि नै महानगरको मेयरका लागि तयारीमा थिए । उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा विवादास्पद छन् । नेसनल मेडिकल कलेजमा हुने विकृति र विसंगतिलाई लिएर उनी सधैं आलोचित हुँदै आएका छन् । नेसनल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस भर्नामा विद्यार्थीहरूबाट ६० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुलेको भन्दै अन्सारीको विरोध हुँदै आएको छ ।
उपमेयरकी उम्मेदवार सोफिया एमाले पर्साका निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी आचार्यकी श्रीमती हुन् । अर्थशास्त्रमा एमए गरेकी उनी एमालेको बुद्धिजिवी संगठन पर्साकी सचिवसमेत छिन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयकी स्थायी उपप्राध्यापक आचार्यले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनकै लागि पदबाट राजीनामा दिइसकेको एमाले पर्साले जनाएको छ ।
एमालेबाट सुन्दर कुर्मी मेयरका आकांक्षी थिए । तर, एमालेले पैसा पनि भएको र चर्चित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपछि कुर्मीले पार्टी छाडेका छन् । उनी उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम प्रवेश गरेका छन् । उनलाई संघीय समाजवादी फोरमले मेयरको टिकट दिने भएको छ । कुर्मी वीरगन्जमा लोकप्रिय नेतामा पर्छन् ।
माओवादी केन्द्रले गण्डक हस्पिटलका सञ्चालकसमेत रहेका रहबर अन्सारीलाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको छ । एउटै पेसाका रहबरलाई माओवादीले अघि सारेपछि उनी पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका हुन् । दुवैलाई चिकित्सा क्षेत्रमा ‘मेडिकल माफिया’ भनेर चिन्ने गरिन्छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनमा भाग लिने नलिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । निर्वाचनमा भाग लिने कि बहिष्कार गर्ने भन्ने विषयमा राजपाको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ । साउन २१ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्ने छ ।
‘साहो’ फिल्मबाट अचानक अनुष्का आउट, कारण यस्तो छ
२५ वर्षसम्म अवरुद्ध रोल्पाको सिरक्याङ भिर सेनाले खोल्यो